Guddoomiye Cumar Filish oo u digay Ciidamada dhexdooda dagaalama - Awdinle Online
Guddoomiye Cumar Filish oo u digay Ciidamada dhexdooda dagaalama
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banadir Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) aayaa si kulul uga hadlay shaqaaqadii dhwaan ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, isaga oo u tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay Shaqaaqaadaas.
Isaga oo ka qeyb-galayay Guddoomiyaha Kulan ka dhacay degmada Kaaraan ayaa waxaa uu ugu baaqay bulshada inay ka hortagaan dadka duhsooda ku dagaalamaya, isla markaana meel uga soo wada jeestaan.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaa uu sheegay in dalkaan uu soo maraya burbur xoogan oo ku yimid, goobaha waxbarashada, Wadooyinka & caafimaadka loona baahan yahay in dib loo dhiso.
Hadalka Gudodomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan degmada Kaaraan ay ku dagaalameen lab Ciidan oo ay kala hoggaaminayeen laba Sarkaal oo ka tirsan Ciidamada, iyada oo weli saan saan colaadeed laga dareemayo degmadaasi Kaaraan.
Previous articleBooliska Nashville oo shaaciyay magaca qof looga shakisan yahay qaraxa
Next articleWufuud horleh oo Maanta ku wajahan Garoowe & qaban qaabada shirka oo ka socota